Proton 5.13-4: kukunda iyo Cyberpunk 2077 mutambo wevhidhiyo | Linux Vakapindwa muropa
Cyberpunk 2077 Ndiwo mutambo wevhidhiyo wanga uchiteerera zvakanyanya mumavhiki apfuura. Iri izita rakagadzirwa uye rakaburitswa naCD Projekt uye iro rakaunzwa munaDecember 2020 iwoyu emapuratifomu akadai seMicrosoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, uyezve yePS5, Xbox Series X uye S, uye zvakare padandemutande rekushambadzira Google Stadia .
Iyo inoshandisa ine giraidhi injini ine simba inonzi REDengine 4 uye iri chaizvo inoenderana nemutambo webhodhi Cyberpunk 2020. Mune ino kesi, 57 makore akazotevera, mune dhistopiya guta rinonzi Night Guta muCalifornia. Munzvimbo ino iwe unowana yakavhurika nyika ine matanhatu matunhu akasiyana mairi ekufamba wakasununguka. Hunhu hwako hunomiririrwa mumunhu wekutanga, uye iwe unotora chinzvimbo chemunhu anonzi V.
V Ane zvombo uye hunyanzvi hwema melee hunyanzvi hunogona kuchinjwa. Uye zvakare, kutaridzika kweV kunogonesawo zvizere, uchikwanisa kugadzira iwo maratidziro aunonyanya kufarira.
Zvakanaka, nemharidzo iyi yaitwa, kune avo vasati vaziva Cyberpunk 2077, ikozvino kwauya mashoko akanaka. Uye ndizvozvo, kunyange hazvo zvisina kuvhurwa yeLinux, Valve yakashanda nesimba kuti Proton 5.13-4 igone kuitsigira. Ndokunge, kana iwe ukatenga Cyberpunk 2077 kubva kune iyo Steam mutengi, iyo inoenderana dhata yakavakirwa mutengi inokutendera iwe kutamba pane yako distro pasina matambudziko.
Uye inozviita mukati AMD GPUs, paunenge uine yazvino vhezheni yeMesa mifananidzo yevatyairi. Panguva ino, varidzi veNVIDIA GPU havazove nemukana uyu. Parizvino, iyo chete mukana wevaridzi veNVIDIA iri kuburikidza neGoogle Stadia kana GeForce IZVOZVI.
Sezvakataurwa Pierre-Loup Griffis, mumwe wevagadziri veValve, CD Projeckt Red, anovandudza weCyberpunk 2077, akavabvumidza kuwana mukana kwekutanga kuti vatange kushanda vese vkd3d (Direct3D layer 12 kuenda kuVulkan), uye radv (mutyairi we AMD MESA weVulkan).
Zvakare, izvo zvazvino shanduko muWine, iyo yakavakirwa Proton, ivo vari zvakare kuunza kumwe kuyedza kwekuyedza kudzikisa CPU mutoro uye kugadzirisa mashandiro, inova zvakare yakanaka nhau ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Proton 5.13-4: kukunda iyo Cyberpunk 2077 mutambo wevhidhiyo
auto-cpufreq: nyowani yekuvandudza vhezheni 1.5.1